Kuratidza zvinyorwa neelebheri anaconda3
Multilayer perceptron (MLP) algorithm ine kusarudzika kwemashure.
Kupinda Dhata: yekudha data fairaProcessor: nzira dzekuvandudzaZvinobuda Mudzidzi: multilayer kudzidza algorithmModel: yakadzidziswa modhiNeural Network Widget inoshandisa Skearn Multi-layer perceptron algorithm iyo inogona kudzidzisa isiri-mutsara mhando pamwe nemutsara.
Iro zita pasi payo rinozoonekwa mune mamwe majeti. Iro zita rekupedzisira "Neural Network". Seti yemuenzaniso parameter: Neurons pane yakavanzika masosi: Inotsanangurwa seye-th chinhu chinomiririra huwandu hweiyo neurons mune i-th yakavanzika. Ed. Iyo 3-layer neural network inogona kutsanangurwa se2, 3, 2. Yakavanzika Yegadziriro Yekuita Mabasa: Kuzivikanwa: isina kuiswa activation, inobatsira mukushandisa mutsara webhokisi bhokisi .. Logistic sigmoid basa -BFGS-B: optimizer muQuasi-Newtonia mhuriSGD: stochastic gradient descentAdam: stochastic optimizer yakavakirwa…